Akakatholakali owathunjwa kuhlaselwa umuzi e-France | News24
Akakatholakali owathunjwa kuhlaselwa umuzi e-France
UNINA wentombazane eyathunjwa ngesikhathi kuhlaselwa uphinde kushiswa umuzi endaweni yase-France emasontweni amabili edlule uthi seloku kwathunjwa indodakazi yakhe akasabuthi quthu ubuthongo ebusuku.
UNkk Nokphiwa Masango ubexoxa ne-Echo ngodaba lokuthunjwa kwendodakazi yakeh uNks Noxolo Masango (28).
UNoxolo wathunjwa ngenyanga eyedlule ngesikhathi kuhlaselwa umnikazi womuzi abeqashe kuwona nesoka lakhe endaweni yase-France. UNks Thokozani Kunene (39) nongumnikazi womuzi wahlaselwa wagwazwa waqede washiswa nendlu washona kanti umfowabo yena endlini uKhehla Sibisi (37) waphuthunyiswa esibhedlela kodwa kugcine ngokuthi ashone naye.
Ngesikhathi kwenzeka sonke lesi sigameko kwabe sekuthunjwa uNoxolo nokumanje okungaziwa ukuthi ukuphi.
Unina wakhe uNkk Masango wasendaweni yaseHopewell uthe nakuba sekudlule isikhathi eside indodakazi yakhe ithunjiwe njengomndeni basanethemba lokuthi bazoyithola isaphila.
Uthe : “Amakhanda ethu asadidekile njengomndeni asisazi ukuthi senze njani sibuhlungu ngenye indlela. Sisanethemba kona lokuthi sizomthola.Akulaleli ebusuku akungeni ngisho ukudla.
Abukho ubuhlungu engibufanisa njengalobu. Lobu ibona buhlungu obunzima engake ngabuzwa.
Ngiyathandaza ukuthi abantu abathathe indodakazi yami bangayilimazi kodwa bathambise izinhliziyo zabo bayidedele,” kubeka yena.
UNoxolo uthunjwa nje ushiye ingane yakhe eneminyaka eyi-8 ubudala nathe unina wakhe ikona okubakhathaza kakhulu.
“Kumanje ingane yakhe ayikho ihambile iye ekhaya layo kuboka baba wayo ngoba asifuni ukuthi nayo igcine isizwa lobu buhlungu esibuzwayo okwamanje. Sicela noma ubani nje nkosi yami ongaba nolwazi lokuthi ingabe yami ishoniswephi. Noma kungabe uyabona ke intombazane ehudulwayo abafana ukuthi aphuthume ayobika emaphoyiseni. Asisoze sakuthola ukuphumula singayitholi indodakazi yethu,” kuphetha yena.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini samaphoyisa i-Alexandra uKapteni Kholeka Mhlongo ukuqinisekisile ukuthi uKhehla Sibisi ugcine eshonile ngenxa yokulimala ngesikhathi eshiswa. Uthe amaphoyisa aphenya icala lokubulala, Elokubamba inkunzi, elokushisa, elokuzama ukubulala kanye nelokuthumba. Ube esenxusa amalunga omphakathi anolwazi ukuba aphumele obala.
LIVE: Bosasa drew up fake invoices to obtain cash, #Statecaptureinquiry hears